QM oo ka hadashey Ciidamo Magaceeda ku howlgli doona oo shalay Muqdisho ka degey. – idalenews.com
QM oo ka hadashey Ciidamo Magaceeda ku howlgli doona oo shalay Muqdisho ka degey.
Masuuliyiinta ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa markii ugu horraysay ka hadashay Ciidamo ka Socda Dalka Uganda oo shalay la Geeyey Muqdisho, kuwaas oo ilaalin Doona Goobaha qaramada Midoobay ku Leedahay Halkaas.
Ciidanka oo markii ay Soo Degayeen ku Lebisnaa Astaamaha gaarka u ah Ciidamada Qaramada Midoobay, ayaa Afhayeenka UNSOM ee Somalia Mr. Aleem Siddique oo warbaahinta Muqdisho ugu warramay, ayaa ka warramay ujeedka ciidamada Yugaandheeska ee tagay caasimadda iyo xilliga ay howlgalka billaabi doonaan.
Tirada ciidamada ee gaadhay Muqdisho ayaa lagu sheegay ilaa iyo 60 askari oo ka socda dalka Yugaandha, kuwaasi oo ka mid noqon doona boqolaal askar oo loogu talagalay inay si gaar ah u ilaaliyaan xarumaah Qaramada Midoobay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay tiradaasi ay yihiin dufcadii ugu horreysay, balse kuwo kale ay dhiman yihiin.
Ciidankan ayaa haatan ka yimi dalka Uganda, waxase la filayaa inay kuwo kale ee dhawaan iman doonaa ka kala iman doonaan dalal kala duwan oo Afrika ah.